ABAGUQULI 7 NGOKUTSHA [NGOKUHLAZIYA], ITHIYORI, UCEBO, ISIQENDU, IITRAILER, SINAZO ZONKE IINKCUKACHA ZAKHO - IIMUVI
I-Transformers 7 yayiphantse ukukhutshwa nge-28 kaJuni 2019. Ukanti emva koko iParamount yayigxotha kwishedyuli yokukhululwa. Kwakhona,
I-Transformers 7 yayiphantse ukukhutshwa ngoJuni 28, 2019. Ukanti emva koko iParamount yayigxotha kwishedyuli yokukhululwa.
Kwakhona, uRocketet wabhengezwa ngoMeyi 17, 2019. Umhla wokukhutshwa awukaqiniseki ngokusemthethweni.
Iinguqu ziye zaqhubeka ixesha elide, kwaye ibe sisiqwenga solutsha lwethu. Ezi ntshukumo zinzulu kunye nokudubula kusenza sibe yi-CGI eyenze umhlaba, kwaye ababukeli bangazi nto ngokwenzeka kwethu rhoqo kwilizwe.
Ithatha ababukeli kubukho apho isibhakabhaka siwumda. Iqala ngeerobhothi ezinkulu ezilwa zodwa, isithuthi esiguqula sibe yirobhothi ebalulekileyo, akukho nto inokuba namandla ngaphezu kwale.
Ukusekwa kweTransformers kuzuze i-4.8 yezigidigidi zeedola kwihlabathi liphela. Ngaphezu koko, sisithembiso esifuna ukwenza ababukeli balumke kakhulu. Kungenxa yokuba kwithuba elifanelekileyo lokuba kufuneka bayile nayiphi na enye into engaphaya yesiseko. Ke bayayikhumbula ifilimu yesixhenxe.
Uthini umhla wokukhutshwa kwemovie?
I-Paramount, kunye no-Hasbro, icwangcisiwe Iinguqu ezi-7 ziya kukhutshwa ngoJuni 24, 2022.
Umboniso bhanya-bhanya omtsha weTransformers awunaso isihloko okwangoku kwaye, ii-casts kunye ne-crews kusafuneka zibhengezwe.
Njengoko i-Bumblebee movie yenza kakuhle kwicandelo lohlahlo-lwabiwo mali. Abavelisi batyale imali eyi-135,000,000 yeedola kunye ne-467,989,645 yeedola kwihlabathi liphela.
Oku kunike ukonyusa ukufota kunye nokuhlela imovie elandelayo yeTransformers.
Iya kuba yintoni iyelenqe lefilimu elandelayo?
Njengoko iya kuba yifilimu yesixhenxe ekumiselweni. AbaGuquli abangaqeshwanga ngamagama, ongumfanekiso oshukumayo wesixhenxe. Iya kubona u-Optimus Prime esazi malunga nesiqalo sakhe kunye nephondo laseCybertron.
Ukunikezelwa kwe-Unicron, eyayiyisiphumo sokungahambi kakuhle kukaQuintessa. Inkqubo yokucinga yeQuintessa kunye ne-Unicorn zazingqubana, kwaye umhlaba uya kubambeka embindini wedabi le-monster phakathi kweTitans.
Ngokubanzi, iqela elibalulekileyo lababukeli elixhasa abaGuquliyo ngabase China. Kwaye kwathiwa yayikukuphela kwesizathu esasibangela ukuba isiqwenga esikhethekileyo se-Age of Extinction sime e-China ukuqaqambisa isihlwele.
Iya kuba yintoni inkqutyana yezavenge ezizayo?
Akukho nto ikhethiweyo ngeli xesha malunga neqela elithweleyo okanye i-cast, kwaye ikamva lefilimu lisemnyama. Yonke into esinokuyifumana ngumhla wokukhutshwa, oya kuba ujikeleze u-2020 okanye phakathi ku-2021.
Ungathini xa sithemba ukuba umboniso bhanya-bhanya ubuya nengxolo kwaye ujongane neqela lababukeli leminqweno kude.
Amaphupha amnandi ekhitshini ixesha lesi-2 isiqendu 2
Ngaba kuya kubakho i-alita 2
ihlaziyeke ngokutsha iimagnolias
ukulungiselela abantu isizini 2 isiqendu 3
isizini 2 yegazi namanzi
mob psycho ixesha 3 umhla wokukhutshwa